Bots Trading for Cryptotrading - Blockchain News
njani bot okusebenzela cryptotrading?
Bot zikhona ngohlobo software, leyo, kwiimeko ezininzi, isebenza ngqo crypto-ukutshintshiselana ngokusebenzisa inkqubo yekhompyutha (API). Injongo bot kukuba ukwenza ngokuzenzekelayo transactions kunye nempahla: yale, i bot kuqhuba uhlahlelo olunzulu lolwazi lorhwebo kunye, ngokususela kwidatha ifunyenwe, ukwenza izigqibo zokugqibela transactions. Kuxhomekeka qhinga okhethiweyo, ubeke uze uzibekele usukelo, umrhwebi uyakwazi ukukhetha enye ezine iintlobo bot:
bot Trading hlaziya ulwazi evela crypto-exchange, nokwenza izigqibo malunga ukuthenga nokuthengisa of cryptocurrency esekelwe parameters ekhethwe uMrhwebi. Olu hlobo bot ungenziwa ngemfuneko ukusebenza ezininzi parameters kwaoko, okanye ukusebenzisa ubuchule ngaphambilini asungulwa abahlaziyi.
bot Arbitrage esweni utshintsho iingcaphulo of Cryptocurrency kwi ukutshintshiselana ezahlukeneyo ngokuzenzekelayo wenze okunye ukufumana ingeniso evela umahluko namaxabiso.
bot Custom, okanye bot ukuze, zisetyenziselwa ukwenza transactions echazwe parameters ukuba zingeniswe ngesandla okanye ekhethiweyo kwimo oluzenzekelayo.
Script robots ezikhoyo ngohlobo software esisiseko, ngokwesiseko apho umrhwebi nga ngokuzimeleyo ukuqwalasela umsebenzi robot. Isetyenziswa yi abarhwebi abanamava abayaziyo nezo ukuthengisela Crypto Market.
Iingozi Trading Bots kwi Crypto Market
software ezineziphene: asingabo bonke bot ezikhoyo ngoku zaziswa liqela developers zobungcali abarhwebi abanamava crypto. Ngaphezu, i robot, e kabani mthetho wenza impazamo, ngeke nje ukungasebenzi, kodwa inokubangela iilahleko ezinkulu zemali, ingakumbi xa zidityaniswe ne-qhinga kakubi esinyuliweyo. ngoko ke, ngokuba kokuhlawulwa kubalulekile ngokukhetha bot esiqinisekisiweyo kunye negama ethembekileyo kwaye uluhlu olubanzi lwezixhobo.
ekuweni leso le cryptocurrency: cryptocurrencies i asset simbi kakhulu, hayi insured nxamnye ehlala. ke, ngoJuni 2017, e exchange GDAX, ngenxa into enkulu, ixabiso zezulu lehla ukusuka $ 319 ukuba 10 cents. Nje ngeziphumo, Abarhwebi ngubani na awubeka umda stop-ilahleko, kumcimbi lemizuzwana, balahlekelwa enkulu. Ngale ndlela, ezinye bakwaKanan, siqinisekile ukuba bot bakwazi ukusebenza kuphela kwiimeko ezithile kwaye umrhwebi onamava uya ngokucokisekileyo ngakumbi ukuqikelela imeko kwimarike.
ubuqhetseba: kwimarike ezingalawulwayo, amatyala cryptocurrency ubuqhetseba kwenzeka ngokufuthi, nokusebenza bot kungekho ngaphandle. ngoDisemba 2017, i Hexabo scam robot esebenza ngokubonakalayo kwi kwimarike, uvimba imali lomsebenzisi, iswa imveliso ye lwemali crypto, kwaye ke wayeka ukusebenza, yezizathu ngokuthumela zonke iimali kubabhekisi phambili iqonga. kwakhona, ngokuvumelana umthengisi omnye, kufuneka uphephe ithandwa bot free, kuba kunye nabo uyakwazi umxokozelo isoftwe eyingozi, injongo yazo kukuba ukufikelela kwi KDE zabucala izitshixo okanye sebenzisa node umrhwebi ukuze kwemigodi.
Bots Popular for Cryptotrading
3likhefu i robot ethandwayo elikhokhelwa cryptotrading ezenzekelayo, elisebenza ngayo utshintshiselwano ezifana Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi and YOBIT. Inikezela ngelona Ukukhetha enkulu yeephothifoliyo okungaphezu ukuba abasebenzisi Ungakhetha ukutyala okanye ukusebenzisa njengesixhobo yohlalutyo ukuze ukulandelela iimeko zemarike. Ubonelela ukusetyenziswa ngaxeshanye odolo stop-ilahleko kwaye uthathe-nzuzo. It onomlinganiselo ubulungu amane – “initial” for $ 30, “Trading” for $ 50, “Professional” for $ 100, kwaye kwakhona “Individual” ngenxa yesivumelwano.
Cryptohopper i robot ehlawulwa ilifu-based eziya kusebenza nokuba ikhompyutha umrhwebi kaThixo intanethi okanye icimile. abarhwebi abanamava ngokuzimeleyo ngokusesikweni umsebenzi robot, ngexesha wabaqalayo bangasebenzisa ekhoyo “yalawa”. Le robot kwakhona ukuhlalutya uqinisekise ukusebenza imiqondiso inkqubo yorhwebo eyenziwe kwixa elidlulileyo (backtest), has a algorithm Misa Loss ulawulo ukuze, kwaye nazo ngqo kwi Exchange eziliqela. It has iindidi ezintathu umrhumo wenyanga – for $ 19, $ 49 yaye $ 99. A Uhlalutyo olubanzi iqonga inga fumaneka here.
Cryptotrader yenye cryptobots yelifu kakhulu lithandwa zokuthengisa. Kuxhaswa inani elikhulu crypto-ezimali kunye ukutshintshiselana. Kufuneka kwenziwa ngokupheleleyo ngumsebenzisi. Uyababonelela backtesting kunye nemisebenzi ecwangcisiweyo market, leyo evumela abasebenzisi yokuba bathengiselane izicwangciso. It has mahlanu amanqanaba umrhumo wenyanga: for 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC no 0.0214 BTC.
Haasbot Eli liqonga urhwebo ezenzekelayo, ajonge, Okokuqala, kuba enamava bitcoin-abarhwebi. Sebenzisa ubuchule ezivela uhlalutyo technical data. Le robot lihlawulwe kwaye amanqanaba amathathu yobulungu yonyaka: ilayisensi “saqala” for 0.073 BTC, “Simple” for 0.127 BTC kunye “Ukumatanisa” iphepha-mvume, zeziphi iindleko 0.208 BTC. Kuxhomekeka kwilayisensi uthenge, abasebenzisi ungaqwalasela bot eziliqela oqhagamshelwano phakathi eya kukwazi ukwenza iqela lemisebenzi ezahlukeneyo.
Gekko kuba a free open source robot ukuba kunokulayishwa ezantsi kwi GitHub. Kuyinto elula ngokwaneleyo ukuze usebenzise, uye step-by-step imiyalelo ezineenkcukacha eziya kuba luncedo abarhwebi abangenalwazi. Ngaba esibonakalayo elula, nga backtest ubuchule kunye nombono iziphumo yonaniselwano. Ngaphezu, le software robot isebenza kakhulu operating systems.
Zenbot enye umthombo robot open ukuba abathengisi bitcoin. Abasebenzisi robot ungalayisha ezantsi ikhowudi uze wenze zokuguqulwa umsebenzi wayo, kunye algorithm yayo ifumaneka zeenkqubo main yokusebenza. and, ngokungafani Gekko, Zenbot uyakwazi ukwenza imicimbi ophezulu oluqukuqelayo kunye nokusebenzisa amathuba arbitrage. kunjalo, ekuhlaleni crypto ziphawuleka ukuba robot ayikahlaziywa ixesha elide, yaye ngenxa yoko akukho ithuba ukusebenza kunye zingxoxo ezintsha ezithandwayo.
Bot for Cryptotrading